Thailand na-eme ka njikwa oke Myanmar sie ike n'ihi COVID-19
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Ozi banyere njem na Thailand » Thailand na-eme ka njikwa oke Myanmar sie ike n'ihi COVID-19
Dr. Tanarak Plipat, osote Director General nke Ngalaba Na-ahụ maka Ọrịa maka Mịnịstrị Ahụ Ike na Thailand, kwuru na COVID-19 ọnọdụ na Myanmar na-emetụta mbọ ndị Thailand na-agba igbo ọrịa coronavirus ka Thailand na-eme ka ókèala Myanmar sie ike.
Ugbu a na Myanmar, ọrịa COVID-19 na ọnwụ na-arịwanye elu ma na-ebili kwa ụbọchị. Na mbụ, mba ahụ kacha zere njọ nke COVID-19 ma e jiri ya tụnyere ndị agbata obi ya Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia ebe coronavirus na-agba ọsọ n'ọhịa n'oge ọrịa a.
Agbanyeghị na ọnụọgụ ọnwụ na - adịkarị ala - ịnọ ihe dịka 1 n’ime mmadụ 100,000 ọ bụla - nje a na - aga n’ihu ugbu a. Otu ọnwa gara aga, mmadụ 7 nwụrụ site na COVID-19; taa ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ eruola 530. Site na Wenezdee gara aga, a na-akọ akụkọ ikpe 1,400 maka ụbọchị ahụ na-eweta ngụkọta na 22,000.
Ruo ugbu a, Thailand edeela ikpe 3,634 dị mma nke COVID-19 na ọnwụ 59.
Onye isi ndị ọrụ agha nke Thai nke anọ bụ Major General Pramote Phrom-in kwuru na ndị ọrụ nchekwa agbasiela ike na oke ala ya na oke osimiri iji gbochie ndị mba ọzọ si Malaysia ịbanye na alaeze.
“Nnukwu ike ndị ọrụ nchekwa nchekwa nke ndị Thai na ndị Malaysian mere emeela ka ọnụ ọgụgụ ndị na-agbafe n’ụzọ iwu na-akwadoghị gafee ókèala Thailand na Malaysia. Ebe ọ bụ na ọhụụ ọhụrụ nke COVID-19 ntiwapụ (na Malaysia), ọ bụ naanị ikpe ole na ole nke ntinye iwu na-akwadoghị ka a kọọrọ, "Major General gwara ndị nnọchi anya National News Agency nke Bernama.
Dr. Plipat kwuru na ọ bụrụ na ahapụ ndị kwabatara na iwu na-akwadoghị, Thailand nwere ike ịhụ ikpe ikpe coronavirus ya ka ọ bụrụ ikpe 6,000 na mkpokọta.
Dabere na Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA), ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ na Myanmar bụ nke atọ kachasị elu na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Indonesia na Philippines.
Ndị CCSA depụtara otu ndị ọbịa 5 nke ndị si mba ọzọ ga-ahapụ ha ịbanye na mba ahụ:
• Ndị na-eme egwuregwu mba ọzọ maka mmemme mba ụwa akọwapụtara
• Ndị na-abụghị ndị kwabatara na Visa
• Ndị njem nleta ogologo oge na Visa njem nleta pụrụ iche (STV)
• Ndị ji APEC Card
• Ndị chọrọ ịnwe oge na ogologo oge na Thailand
CCSA setịpụrụ ụkpụrụ nduzi iche iche maka ndị ọkwọ ụgbọ elu THAI Airways na ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ụgbọ elu mbughachi.
Ndị mba ọzọ na-achọ ịnọ ogologo oge na ogologo oge na Thailand ga-egosiputa na ha nwere opekata mpe 500,000 baht na akaụntụ akụ ha maka ọnwa isii gara aga.
SUNx Malta na-ebi ndụ na Mgbanwe Njem Enyi na Enyi
Air Canada na Transat AT Inc. kwubiri azụmahịa emeziri maka ụlọ ọrụ abụọ